हिमाल खबरपत्रिका | निर्मला आमा
परिस्थितिले सानैमा घारको अभिभारा बोक्न बाध्य बालबालिकालाई पढ्ने र सीप सिक्ने अवसरको खाँचो छ।
निर्मला (दाउरा बोकेको), एक
वर्षअघि मंगलसेन अछाममा।
तस्विर: रुपा जोशी
निर्मला १४ वर्षकी भइन्, पहिले बालविवाहको समयमा भए आमा बन्ने उमेर पुगिसकेकी। तर, उनी योभन्दा कलिलो उमेरमै 'आमा' बनिसकिन्। सात वर्षकी छँदा एचआईभीबाट आमाको मृत्यु भयो, भारत गएका बा फर्केनन्, भएका एक दाजु पनि विरलै घर आउने गर्दथे― दुई वर्षको भाइ सुरेश र चार वर्षकी बहिनी सीतालाई हुर्काउने–बढाउने जिम्मा निर्मलाकै काँधमा आइपर्‍यो। न 'गर्दिनँ' भन्न पाउनु, न 'सक्दिनँ' भन्न!
यसरी बालखैमा 'आमा' बनेकी निर्मलाको बालापन कता पुग्यो कता। अनुहारमा पीडा झ्ल्किन्थ्यो, ओठमा हाँसो विरलै छचल्किन्थ्यो। चिन्ताले ग्रस्त मनमा कुरा खेलिरहन्थे होलान्― भरेको छाक कसरी टार्ने? भोलि के खाने? दशैं आयो, भाइबहिनीलाई कसरी लुगा छेक्ने? उनीहरूको कापीकलमको खर्च कसरी पुरुर्‍याउने?
घरबाट सदरमुकाम 'बजार' टड्कारै देखिन्छ, तर दाउराको भारी बोकेर जाँदा झ्ण्डै एक घण्टा लाग्छ। त्यहाँ निर्मला दोकानै पिच्छे, 'दाउरा चाहिन्छ?' भनेर सोध्दै हिंड्छिन्। कसैले किनिदिए, एक–दुई दिनको खाना जोहो गरेर घर फर्कन्छिन्। दाउराको चटारो बाहेक भ्याएसम्म छरछिमेकमा ढिकीजाँतो, गोडमेल गरेर अलिकति अन्न र पैसाको जोहो गर्छिन्।
आमा बित्दा निर्मला यति सानी थिइन्, उनलाई आमाको माया र ममताको खासै सम्झ्ना छैन। बा पनि बेपत्ता भए। दाइ–भाउजू कहिले–कहिले आउँछन् र फेरि भारत पलायन हुन्छन्। यो बर्खामा आएर निर्मलाले 'गरीबी निवारण' बाट पाएको बाख्रै काटेर खाइदिए।
निर्मलाको बालापनको झ्ल्को मैले पोहोर युनिसेफको अमेरिकी समितिको डकुमेन्ट्री बनाउने सिलसिलामा कुराकानी गर्दा पाएँ। निर्मलालाई पढ्न जाने ठूलो धोको छ, तर गर्न केही सक्नु छैन! अनि त भविष्यको कुरो सोध्यो भने उनी केही नबोली बस्छिन् र निःशब्द हामीलाई नै प्रश्न गरिरहेकी हुन्छिन्― 'के को भविष्य?' 'कसको भविष्य?'
“तिम्रो जीवनको सबैभन्दा बेमोजको बेला कुन थियो?” भन्ने प्रश्नमा 'आमा बित्दा' भन्ने जवाफ आउने अपेक्षा गरेका थियौं। तर निर्मलाले जमिनको धूलो खुट्टाले कोतर्दै सानो स्वरमा भनिन्, “स्कूल जान नपाउँदा!”
निर्मलालाई नभेटेको एक वर्ष भयो। तर सकेसम्म सोधपुछ गरेर जानकारी लिइरहन्छु। पायक परेको बेला खर्च पठाउँछु ती सानी 'आमा' लाई अलिकति फुर्माइस गर्न। अनि यतैबाट अलि अलि पहल गर्छु, जिल्लाका साथीहरूको मद्दत लिएर, निर्मला र उनी जस्तै सानैमा घरको अभिभारा बोक्न बाध्य 'आमा' र 'बा' हरूलाई अक्षर–अंक चिन्ने र केही सीप सिक्ने अवसर दिलाउन।
खुशीको खबर, शायद तिहारपछि स्कूलको पहुँचबाट बञ्चित किशोरकिशोरीका लागि जिल्ला शिक्षाको पहलमा विशेष अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन हुँदैछ रे! अनि बल्ल निर्मला 'आमा' फेरि हाँस्ने र छिनिएको बालापनमा अलिकति भए पनि रम्ने थिइन् होला!